Pejy 5 - 5 famitana hetsika izay tokony ho voarara amin'ny WWE sy ireo mpikomy mampiasa azy ireo - Wwe
Fihetsiketsehana famaranana 5 izay voarara amin'ny WWE sy ireo mpikomy izay mampiasa azy ireo
Mpamily Meltzer # 5 - Ny Tanora Bucks
Ny Young Bucks dia tsy hikapoka ny mpamily Meltzer amin'ny peratra WWE mihitsy
Ny Bucks dia heverina ho iray amin'ireo ekipa tag lehibe indrindra amin'ity taranaka ity, izay mamoaka ny karazana fihetsika manafintohina tsy manam-paharoa. From Alzheimer voalohany (Stereo Superkicks) mankany amin'ny Bebe kokoa amin'ny volanao , Tompondaka tamin'ny ekipa Tag IWGP teo aloha dia nanavao toerana vitsivitsy tamin'ny tolona matihanina androany. Miaraka amin'ny tsaho rehetra momba ny Young Bucks sy ny sisa amin'ny Elite, tsy dia hahataitra ny mahita an'i Matt sy Nick Jackson hiseho amin'ny fandaharana WWE ato ho ato.
Raha toa ka miasa any NXT na amin'ny Raw / SmackDown ireo Young Bucks dia azontsika antoka fa hahita ny ankamaroan'ny repertoire azy ireo hanaraka azy ireo ... afa-tsy hetsika iray ihany.
kristen stewart sy dylan meyer
Ny famaranana mahatalanjona an'ny Young Bucks, ilay mpamily Meltzer, dia tsy hahita ny hazavan'ny andro amin'ny WWE mihitsy. Raha manao ny fitsambikinana i Bucks, dia terena izy ireo hanilika ny hafainganan'izy ireo sy ny fanavaozana azy, ary tsy isalasalana fa holazaina amin'izy ireo mba handao tanteraka ny mpamily Meltzer.
te-hanomboka fiainana vaovao
Ny WWE dia efa manana fitsipika matanjaka momba ny piledrivers fampiasa indrindra, avelany fotsiny ny superstar tsy maintsy atokisany hamoaka izany. Na dia avela hampiasa ny Tombstone Piledriver aza i Kane sy i Undertaker, dia tsy fahita firy na dia iray hafa aza ny fiovana niseho. Tamin'ny fahatsiarovana vao tsy ela akory izay, CM Punk sy John Cena ihany no namaky vitsivitsy tamin'ny tranga tsy fahita firy.
Ny fahafantarana ny fijoroan'izy ireo eo am-pandehanana, dia tsy avelan'izy ireo mihitsy ny loza ateraky ny superstar iray hafa manampy ny hetsika rehefa avy niantsambotra tamin'ny tady izy ireo.
stephanie mcmahon sy zaza telo
inona no holazaina mba hampaherezana olona